पब्लिसिटी पाउन जुहीले गरिन् यस्तो काम, अदालतले दियो कडा झड्का !
Homeमनोरञ्जनपब्लिसिटी पाउन जुहीले गरिन् यस्तो काम, अदालतले दियो कडा झड्का !
मुम्बई । बलिउड अभिनेत्री जुही चावलालाई २० लाख जरिवाना तिर्न भनिएको छ । ‘फाइभ जी’ प्रकरणमा दिल्ली उच्च अदालतले उनलाई यो जरिवाना तोकेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
अभिनेत्री जुहीले ‘फाइभ जी’ को विरुद्धमा दिल्ली उच्च अदालतमा एक याचिका दायर गरेकी थिइन् । जसमा उनले ‘फाइभ जी’ को रेडिएसनको प्रभाव नागरिक, जनावर, वनस्पति लगायतमा पर्ने सम्बन्धी मुद्दा उठाएकी थिइन् । जसको फैसला हालै दिल्ली उच्च अदालतले सुनाएको हो ।
अदालतले अभिनेत्री जुहीको विपक्षमा फैसला सुनाउँदै २० लाख जरिवाना तिर्न भनेको छ । साथै अदालतले जुहीको याचिका खारेज गरेको छ । अदालतले भनेको छ, ‘याचिका कर्ताले कानुनी प्रक्रियाको गलत प्रयोग गरेको छ ।
यस्तो लाग्छ यो प्रचार पाउन गरिएको हो । किनभने याचिका कर्ता जुहीलाई पनि थाहा छैन कि उनको याचिका तथ्यमा आधारित नभएर कानूनी सल्लाहमा आधारित रहेको छ ।
पब्लिसिटी पाउन र कोर्टको समय दुरुपयोग गरेको कारणले उनलाई जरिवाना गरिएको छ ।’ अभिनेत्री जुहीले अदालतमा याचिका कर्ताको तर्फबाट तिर्नुपर्ने कोर्टको पूरै डेढ लाखसमेत तिरेकी छैनन् । अदालतले एक साताभित्र उक्त शुल्क पनि तिर्न निर्देशन दिएको छ ।